January 6, 2020 - ThutaSone
January 6, 2020 ThutaSone 0
ယနေ့မှာတော့ တစ်ရက်ကို ငှက်ပျောသီး၃လုံးစားပေးခြင်း ဖြင့်ရရှိမည့် အကျိူးကျေးဇူးလေးရေးပေးပါရစေ … ၁.အသက်၄၀ကျော်လာသည်နှင့်ရိုးတွင်းချဉ်ဆီလျော့လာပြီး အရိုးအဆစ်နာကျင်လာတတ်ပါတယ် ….ဒါကြောင့်မနက်နေ့ညငှက်ပျော်သီးမှည့်၃လုံးစားပေးပါ။ ၂.အစာအိမ်ကင်စာသမားများနှင့်အရိုးကင်ဆာသမားများ ငှက်ပျောသီးစားပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါကိုမြန်မြန်သက်သာစေမှာပါ…..။ ၃.စိတ်ဖိစီးပြီးစိတ်ညစ်မှုဝါဒနာဖြစ်လျှင် ငှက်ပျော်သီးမှည့်စားပေးပါ…..။ ၄.ကျောက်ကပ်အားနည်းကျောက်ကပ်နာကျင်မှုအတွက် ပိုတက်စီယံကြွယ်ဝသောဌက်ပျောသီးကိုနေ့စဉ်စားပေးပါ….။ ၅.အူမကြီးမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်နိူင်ရန် နေ့စဉ်ငှက်ပျောသီးစားပါ…..။ ၆.မျက်စိမှုန်ခြင်း မျက်စိတိမ်ကပ်ခြင်းများအတွက် နေ့စဉ်ငှက်ပျောသီးစားပါ…..။ ၇။ဝမ်းချူပ်ပြီးအပူအပုတ်ကိန်းအောင်းနေလျှင် ညစဉ်ငှက်ပျောသီးစားပေးပါ….။ ၈.ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး အင်အားမရှိဖြစ်နေလျှင်လည်း […]
တရားပွဲတွေလုပ်ချင်ရင် ”ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဆက်သွယ်လို့ရနိုင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ”…
၄။မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ဒေါက်တာကောဝိဒ ၀၁၅၄၇၁၃၁ ၀၉၅၀၂၂၉၈၆ ၅။သီတဂူကြယ်တစ်ပွင့် ၀၉၂၀၁၁၁၅၃ ၀၉၆၈၁၂၈၉၆ ၆။ဦးအဂ္ဂ ၀၉၅၀၅၅၈၃၈ ၇။ဓမ္မစေတီ ဦးကောသလ ၀၁၅၈၄၃၁၇ ၈။မေတ္တာအေးဆရာတော် ၀၉၅၁၄၂၄၀၄ ၉။ဇလွန် ဦးကောသလ္လ ၀၉၅၀၅၉၆၂၆ ၁၀။သီတဂူအရှင်ဒေဝိန္ဒာဘိဝံသ ၀၉၈၆၁၆၂၂၆ / ၀၉၇၈၇၇၈၇၅၆၇ ၁၁။အရှင်သောမ ၀၉၈၇၄၀၇၃၃ ၁၂။ရေကြည်ဆရာတော် ပြည်တွင်းပြည်ပသာသနာပြုဓမ္မကထိအရှင်သီလာနန္ဒ […]
မြန်မာနိုင်ငံကပါ သတိထားရတော့မည့် တရုတ်နိုင်ငံမှ အမည်မသိ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး အန္တရာယ်
တရုတ်နိုင်ငံမှာ အမျိုးအမည် မသိတဲံ ဗိုင်းရပ်အသစ်တစ်မျိုး ကူးဆက်ပျံ့နှံ့နေပြီးတော့ လူပေါင်း ၄၄ ဦးအထိ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း လတ်တလော သတင်းတွေအရ သိရှိရပါတယ်။ မူလအရင်းအမြစ်နဲ့ အမျိုးအမည်ကို မသိသေးတဲ့ နမိုးနီးယား ရောဂါဟာဆိုရင် အာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင် သိရှိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ရောဂါပျံ့ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် အာရှိနိုင်ငံတွေကပါ ပါဝင်လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ […]
သဒ္ဓါတရားရဲ့တန်ဖိုး နတ်တွေက ပိုသိတယ်…
သဒ္ဓါတရားရဲ့တန်ဖိုး နတ်တွေက ပိုသိတယ်… သဒ္ဓါရဲ့တန်ဘိုးကို လူတွေထက် နတ်တွေက ပိုသိတယ် ၊ဘာဖြစ်လို့ ပိုသိသလဲဆိုတော့ လူတွေက စီးပွားဥစ္စာကို ကြီးစားပြီး ရှာကြရတယ်…. ကိုယ့်ရဲ့ လုံ့လဝီရိယကြောင့် စီးပွားဥစ္စာတွေ တိုးတက်ကြတယ်ဆိုတော ကံ,ကံရဲ့အကျိုးကို သိပ်ပြီးမယုံကြည်ဘူး၊ သဒ္ဓါရဲ့စွမ်းအားကို သိပ်ပြီးမသိကြဘူး…. နတ်တွေကျတော့ ကံ,ကံရဲ့အကျိုးကို […]
စွန့်ပစ်ဆေးသွင်းပိုက် ၃တန်ခန့် နေ့စဉ်ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုဆိုသော ကျန်းမာရေးဌာန
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများမှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ဆေးသွင်းပိုက် ၃တန်ခန့် နေ့စဉ်ပျောက်ဆုံးနေဟုဆို ရန်ကုန်မြို့ရှိ အစိုးရ/ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများမှ ဆေးရုံးသုံးပစ္စည်းစွန့်ပစ်အမှိုက်တန်ချိန် စုစုပေါင်း ၆တန်ခန့် နေ့ စဉ် ထွက် ရှိ နေသော်လည်း ဆေးသွင်းပိုက်၊ ပလတ်စတစ်ဘူးခွံများပါဝင်သည့် စွန့်ပစ်အမှိုက် ၃တန်ခန့်မှာ နေ့စဉ် ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း တိုင်းဒေ သကြီး […]
ဒူးနာ၊ခြေဆစ်နာနှင့် အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲ တတ်သူများအတွက် ခရမ်းသီး မီးဖုတ်
ဒူးနာ၊ခြေဆစ်နာနှင့် အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲနာ ပျောက်ကင်းစေတဲ့ အစာအာဟာရ ခရမ်းသီးမီးဖုတ်ကို တစ်လုံးသုံးရာကျပ်၊နှစ်လုံးငါးရာကျပ်လို့ ပြောပါတယ်။ သုပ်စားဖို့ တစ်လုံးသုံးရာကျပ်နဲ့ ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ခရမ်းသီးမီးဖုတ်ကို သုပ်တာကတော့ အမျိုးမျိုးရှိကြ ပါတယ်။ မိမိ နှစ်သက်သလိုသာ သုပ်စားကြပါ။ ခရမ်းသီးကို ဒူးနာ၊ခြေဆစ်နာနဲ့ အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲသူတွေ အနည်းလေး တစ်ပတ်သုံးကြိမ်လောက် မှီဝဲသင့်ပါ တယ်။။ […]
ထီးဆောင်း မျက်စိ အခမဲ့အထူးကုဆေးရုံအား ဆက်သွယ်လိုလျှင် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များ
ထီးဆောင်း .. တစ်သက်လုံး မမြင်ရတော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံ ထီးဆောင်းကျေးဇူးကြောင့် ပြန်မြင်ရပြီသမီးရယ်လို့ သူငယ်ချင်းအဖေပြောခဲ့ဖူးလို့ ကြားဖူးတာကြာခဲ့ပေမဲ့ မရောက်ဖူးသလို ဘယ်နားရှိမှန်းကိုမသိခဲ့ပါဘူး။ စစ်ကိုင်းကနေ မုံရွာ သွားရင် မြင်းမူ မရောက်ခင် ၃ မိုင် အလို မှာ “ထီးဆောင်း”ဆိုတဲ့ ရွာလေး ရှိပါတယ်။ အခမဲ့ မျက်စိကုသပေးတဲ့ […]
ဟိုက်ဂျက်ကားလေးဖြင့် ခရီးဝေးသွားတတ်ရင် ဒါလေးသိထားပါ
ဟိုက်ဂျက်ကားလေးဖြင့် ခရီးဝေးသွားတတ်ရင် ဒါလေးသိထားပါ ဟိုက်ဂျက်ကားလေးဖြင့် ခရီးဝေးသွားတတ်သော မိတ်ဆွေများ သတိပြုရန် မြန်မာပြည်မှာ အသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ဟိုက်ဂျက်ဟုခေါ်သော အပေါ့စားကုန်တင်ယာဉ်ငယ်အကြောင်း သိထားသင့်သောအချက်များလေ့လာနိုင်ရန်ဖြန့်ဝေခြင်းပါ အင်ဂျင်ပါဝါ ၆၆၀ စီစီ အင်ဂျင်ကိုဘေးစောင်းတည်ဆောက်ထားသောကြောင့် လည်ပတ်နှုံးအလွန်ကောင်းပါတယ်။ အပေါ့ဆွဲမှာဆိုင်ကယ်ကဲ့သို့သွက်ပါတယ်ကုန်ပါရင် (သိုမဟုတ်) လူများရင် ထင်သလို၊ လိုသလိုနင်းတိုင်း‌ မပါတော့ပါ။ အရှိန်ယူရပါမယ် ဝိတ်ပါရင် […]
စပိန်နိုင်ငံမှာ စေတီတွေ တည်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို စတင်ကိုးကွယ်လို့နေကြပြီ
ပညာတွေတတ်ပြီးအကောင်း အဆိုးကို မခွဲခြားနိုင်ရင်အလကားပဲ၊ ငွေကြေးချမ်းသာပြီး အတ္တတွေကြီးကာကိုယ့်အိတ်ထဲပဲ ထည့်ဖို့ ကြိုးစားနေရင်လည်းအလကားပါပဲ။ အတွေးအခေါ် ဘယ်လောက်မြင့်မြင့်စာနာနားလည်ပေးနိုင်တဲ့ နှလုံးသား မရှိရင်အလကားပါပဲ။ ရုပ်ရည် ဘယ်လောက်ချောချောလူတစ်ယောက်ကို လူလို့ မမြင်တတ်ရင်အလကားပါပဲ။ အသိပညာ ဘယ်လောက်ရှိရှိတစ်ခြားသူပြောတဲ့စကားကို တန်ဖိုးမထားတတ်ရင်အလကားပဲ၊ အလုပ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစား ကြိုးစားရိုးသားမှုမရှိရင် အလကားပါပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ တော်နေပါစေ…ကိုယ်ချင်းစာစိတ် […]
နောက်ထပ် သိန်း၁၀၀၀ဆုတစ်ဆုပါ ကံထူးနေပြန်သည်ဟုဆိုသော အံ့ဖွယ် ”သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုရှင်”…
အတော်လေး ကံကောင်းလွန်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် 30 ရက်နေ့မှာ 541 ကို 8000 ဖိုးပေါက်တယ်။ 1 ရက်နေ့ သိန်း 15000 ပေါက်တယ် ။ ပြီးပလား မပြီးသေးပါဘူးဗျာ ၊ ရန်ကုန်မှာ ထီသွားထုတ်နေတုန်း ဖုန်းဆက်မရလို့တဲ့ ဈေးထဲကို လူတစ်ယောက် လာရှာတာ ။ […]